Hiirshabeele oo ka hortimid Shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee Muqdisho – Radio Daljir
Hiirshabeele oo ka hortimid Shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee Muqdisho
Juunyo 27, 2021 4:11 b 0
Qoraal ka soo baxay Maamulka Hirshabelle ayaa lagu cadeeyay in aysan ka qeyb ahayn shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee uu dhawaan ku casuumay Ra’iisul Wasaare Roble madaxda dowlad goboleedyada iyo Maamulka gobolka Banaadir.
War ka soo baxay Madaxtooyada Hirshabelle ayaa lagu shaaciyay in sababta uu Maamulka Hirshabelle u qaadacay shirkaasi ay tahay in aan lagala tashan.
Sidoo kale Maamulka Hirshabelle ayaa sheegay in wixii ka soo baxa shirka Madasha Qaran aysan qeyseyn maamulka Hirshabelle uuna dhowri doontaa fulinta Heshiiskii 17dii September iyo kii 27dii May ee lagu saxiixay Magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa kamaqan dalka isagoo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa dalka TUrkiga.
Qoraalka ka soo baxay Maamulka Hirshabele ayaa u qornaa sidan;
Madaxweynaha Galmudug oo Muqdisho tagay